Service Limousine Basel | Umshayeli ongezibiza nge-limousine
Limousine iqasha iBasel. Isevisi enhle kakhulu nezintengo ezilinganayo
Ukuhamba ngezinyawo zakho, ukuvakasha, imihlangano nokuningi okuningi.
yethu isevisi Limousine Basel imele ukudluliselwa okuhle kakhulu ngekhwalithi yethu ephezulu Izimoto ezivela eMercedes, Unomhlangano obalulekile futhi udinga ukuxoxa ngezinto ezithile ezibalulekile ngenkathi emgwaqweni, uqasha imimousine yethu yokuhamba okuhlakaniphile nokuphephile kusuka endaweni oyifunayo uya endaweni oya kuyo.
Service Limousine Service Basel esenzweni ngawe
Uma unezincomo eziningana ezindaweni ezihlukahlukene ngosuku olulodwa, isib. Kusuka eBasel ngemuva Zurich, Lucerne, Bern, Geneva / Geneve noma amanye amadolobha aseSwitzerland, xoxani nomzila wakho nathi kanye nesikhathi sethu sokulinda. Sikuqinisekisile inani lentengo yebhajethi ne-excellent limousine service ezungeze iBasel naseSwitzerland.
amakhasimende ethu avela ezimbonini ezilandelayo:
• qaphela imboni
• Ubunjiniyela bokusebenza.
Sitshele, sithanda ukuza ukwethula abagibeli bethu kanye nezimoto zethu, ukuze wenze umbono wokuqala. Ngokuqinisekile uzothola i-sedan efanele yokuhamba ibhizinisi lakho.
Isevisi yakho ye-Limousine Basel
isevisi LimousineI-International evela eBasel isho ukuthi sihamba amabanga amade namaLimousine ethu eSwitzerland. Kungakhathaliseki ukuthi udinga ukuhamba ngokushesha kusuka eBasel, Zurich noma eBerne ukuya endaweni yokuqokwa kwamanye amazwe, noma nje ufuna ukuhlangabezana nohambo olukhululekile ohambweni lwakho olude, siyaqiniseka ukuthi awuphuthelwa noma yini phakathi nohambo. Sikulethela ngokuphepha nangengqondo nge-limousine yethu evela eBasel kuya eJalimane noma eFrance.
Qasha manje isevisi yakho yokuhamba nge-VIP esuka ku-Limousine Service Basel!
Qaphela: Sicela nge * gcwalisa amasimu amakwe.